Free Gemetchu Ayena, Free All Oromo Political Prisoners! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFree Gemetchu Ayena, Free All Oromo Political Prisoners!
Free Gemetchu Ayena, Free All Oromo Political Prisoners!
Amajji bara 2020 keessa ture. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Barruu Gullallee Post kan gaafa Dilbataa baatu irratti, dhimma hidhaatii hiikamuu Koloneelichaa fi iccitii isaan Dr. Abiy waliin dubbatan irratti barreessuuf, beellama afgaaffiin isaan waliin qaba ture.
Koloneel Finfinnee naannoo ‘Haayyaahulet’ daandii Qalloo gara Imbaasii Ingiliz geessurraan Hoteelan ammaaf maqaasaa dagadhe tokkotti na beellaman.
Meeshaalee Afgaaffiif na fayyadaniifi Kaameraa qabadheen sa’atii jedhamettin bakka sana qaqqabe.
Tibba sana Koloneel Gammachuu reef waan mana hidhaatii ba’aniif hedduu ko’ommataniiru. Firri fagoo, firri dhihoo namoota hedduutu bakka sana dhaqee isaan dubbisaa ture. Yeroo qaalii sana keessaa garuu Gullallee Postiif sa’atii kennanii na beellaman.
Waayila hojii kiyya yerosii Qaasim Amaanoo wajjin achi geenyee isaaniif bilbille. Gad ba’anii fuula ifaafi ilkaan akkuma maqaa isaanii Gammachuu isaan fakkeessu nutti agarsiisanii nu simatan. Akkuma dhufaniin “Lalisaan si’ii?” Jedhan eyyee jennaan himatanii harka nu fuudhan.
“Bara rakkoo kana keessatti Gaazexaa maxxansuun keessan hedduu nama gammachiisa. Wanti barreeffamu seenaadha. Intalli koo yeroon mana hidhaa jiru dhuftee, ‘Gaazexaan Gullallee Post jedhamu, mata duree ‘Dhaddacha Murtii dhabe’ jedhuun waa’ee kee barreesse.
Jawar ammoo Facebook isaarratti share goonaanin arge’ jettee natti himtee turte. Sagalee naaf ta’uu keessaniif ulfaadhaa” jedhanii ni galateeffatan. Nus isaan galateeffannee, barruu isaan jedhan kanas harkatti kennineefii, xiqqoo haala mimmijeeffannee, bakka teessumaa erga tolfannee booda gara Afgaaffii sanatti dabarre.
Afgaaffii sana keessatti Koloneel dubbii jajjabduu dubbatan. “Itiyoophiyaan beektotaafi namoota jajjaboo Oromoo fiffilattee nyaattus, hanga har’aatti hin furdanne. Kaabinoonni Itiyoophiyaa Hoolaafi Sangaa Coomaa filatanii nyaatu. Isaan garuuu nyaatichaan garaa baasaniiru. Itiyoophiyaan ammoo Hayyuu Oromoo fi goota Oromoo isa ciccimaa filattee nyaattus hin furdanne. Sichis hin gabbattu. Dhiigni Oromoo dhangala’uufi lubbuun hayyoota Oromoo harka Itiyoophiyaa keessatti badaa jiru, Itiyoophiyaa huuqqisaa jira. Dhumarras summi ta’ee lafaan ishee ga’a.” jechuun dubbii akka ajaa’ibaa tokko dubbatan.
Anaafi waayillikoo hedduu ajaa’ibsiifannee callisnee isaan dhaggeeffachaa turre. Koloneel waraana osoo hin taane Hayyuu akka ta’an dubbii isaaniirra barre. Ragaa waliin, sababaafi bu’a waliin dubbii toora qabu dubbatu. Dubbii, akkaataan hubannaafi tasgabbiin isaanii talaalliidha. Suuta nama waga’u; gurratti miyaawa.
Koloneel itti dabalanii akkas jedhan, “Oromoon Impaayera Itiyoophiyaa qofa lolaa hin jiru. Itiyoophiyaa kana keessa, harka Ameerikaa, Raashaa, Isiraa’eelifi Chaayinaatu jira. Warri kun hundi dantaa siyaasaa isaaniif jecha gaaffii Oromoo Itiyoophiyaa waliin ta’anii ukkaamsu. Hayyoota Oromoo isa kaan maallaqaan, isa kaan humnaan Afaan qabu. Kanaaf Oromoon sababa jabina isaatiif amma kanayyuu dhaga’ame malee, impaayera Itiyoophiyaa qofa miti diinni keenya. Kan nu lolu, kan nuti lollu, diina lafa jalaa hedduu qabna” jechuun dubbatan.
Namni kun hedduu raage; fageessee haasa’e. Duuba deebi’ee seenaa nu yaadachiise; fakkeenya fudhatee ni amansiise. Dhimma Dr. Abiy Ahimad gara Masaraa Mootummaatti Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waamee haasofsiise ilaalchisuun, “maal haasoftan?” jedheen gaaffii gaafadhe.
“Abiy waliin gaafa Baadimmee turre wal beekna. Raadiyoo nuuf sirreessa ture. Yeroo sana baayyee ta’uu baatus, al tokko tokko dhufee, dhiibbaa warra Habashaafi waayyannee kana natti hasa’a ture. Garuu an sababan olmaasaa beekuuf baayyee itti hin dubbadhu ture.
Gaafa masaraatti na waames, ‘yeroo waraana keessaa nama fottokfattanii WBOtti makamtan sana maalif na dhoksitee, ani Oromoo mitii maal ta’a yoo anas ofitti dabaltanii mari’attaniirtu ta’e?’ jedhee na gaafate.” jechuun Koloneel waan achitti haasa’an nutti himuun isa kaan ammoo gaaf tokkon sitti hima jechuun irra darban. Garuu ammoo yeroo barbaaddetti mirga masaraa dhuftee na waliin haasa’uu qabda. Amma booda garuu mana hidhaatii ni baata jechuun akka Dr. Abiy itti dubbate Koloneel nutti himanii turan.
Ergasii Gallallee Post fi Koloneel deebi’anii wal hin arganne. Koloneel garuu, kitaaba waa’ee waraanaa barreessaa akka jiran natti himanii turan. (Uummatnis Abbootiin qabeenyaas Kitaaba nama kanaa utuu maxxansiifneefi silaa dansa)
Guyyaa har’aa Koloneel Gammachuu Mana Murtiitti dhihatanii dubbii dubbataniin, “Dr. Abiy masaraatti na waamee, ‘Badhaadhinatti dabalami. Nu waliin hojjedhu’ naan jennaanin dide. Kanaafin dararamaa jira. Hattootaafi namoota nama ajjeesan gidduutti hidhameen hirriba malee bulaa jira” jedhanii dubbatan. Tarii “isa kaan ammoo gaaf tokkon sitti hima” kan isaan jedhan kanuma ta’innaa!
Hayyuufi gootni kun aarsaa guddaa Oromoof baase. Nama kutataafi xiiqeffataadha. Dararamuu osoo hin taane silaa badhaafamuutu malaaf turs. Yoo “Free” jechuun sagalee taateef ammas nam jedha.
Extraordinary. Ethiopia calls for debt relief while waging an immensely costly war against it’s own people in Tigray
Hiriirri Deeggarsa Dirqii Bilxiginnaan waamte, Hararghee, Baalee Roobee, Walisootti gara mormiitti jijjiirame